Walaaloo mirigaa harargee
Mirriysaa: Sirna Harargeetti seenaafi aadaan ittiin ibsamu
By Abdulbasit Abdusemed – November 21, 2014
Maxxansa keenya har’aatiinis afoola Godinaalee Harargee Bahaafi Lixaatti beekaman keessaa Mirriysaa ilaalchisuun barreeffama kitaaba ‘Mirriga Oromoo Harargee’ jedhuurraa argannee akka gaazexaa keenyaaf ta’utti akka armaan gadiitti qindeessinee dhiheessineerra.
Afoola mirriysaa kana yeroo baay’ee kan mirrigu maanguddoota yaadaan bilchina qabaniidha. Sirnicharrattis alangaan bakka guddaa qaba. Maanguddoon gosaa alangaa qabachuun mirriga. Yeroo mirriganis akkaataa ittiin jalqabaniifi xumuran qaba. Kunimmoo gosoota afoolaa kanneen biroorraa kan adda taasisu keessaa tokko. Walaloon mirriysaa armaan gadiis kanuma ibsa.
Magaalaa dhukkubaa dirqiin nutti dhaabanii jechuun quuqama qaban ibsatu.
Author MALKA RAFUUPosted on July 8, 2018 August 15, 2018 Categories Afaan oromoo, UncategorizedTags OmnLeave a comment on Walaaloo mirigaa harargee
Author MALKA RAFUUPosted on April 16, 2018 Categories Afaan oromooTags Oromo
Author MALKA RAFUUPosted on June 25, 2017 June 25, 2017 Categories UncategorizedLeave a comment on First blog post
via ​Moggaasa qubee irraa waan hubannu
Author MALKA RAFUUPosted on January 9, 2019 Format QuoteCategories UncategorizedLeave a comment on ​Moggaasa qubee irraa waan hubannu
Author MALKA RAFUUPosted on January 9, 2019 Format QuoteCategories UncategorizedLeave a comment on Mammaaksota
Afaan Oromoo jechoota kumaata hedduun lakkaa’aman qaba. Kanaaf jechoota walfakkaataan gareedhaan qoqqooduun xiinxalluun ala hundasaa gargaratti xiinxalluun rakkisaadha.
Haaluma Kansan Jechoota Afaan Oromoo akkaataa galmaa fi unkaa( context and Form) irratti hundaa’uun gareewwan shanitti qoodamu.
5. Durduubee(pre and post position) jedhamu.
Maqaan itti waamama √namaa,
√yaada waan tokkoo fi kkf bakka bu’uun kan ibsuudha.
Fkn:1 Caaltuun barattuudha.
Jechi ‘Caaltuu’ jedhu maqaa hima kanaa agarsiisa.
2. Birbirsi muka guddaadha.
Jechi ‘Birbirsi’ jedhu maqaadha.
Maqaanis gosoota garagaraa qaba. Haaluma kanaan Maqaa iddoo shanitti addaan hirree ilaaluu dandeenya.
a) Maqaa dhuunfaa/matayyaa
b) Maqaa gamtaa
c) Maqaa dimshaashaa
d) Maqaa meeshaa
e) maqaa killiyyaa/icciitii jedhamuun qoqqoodamu.
Kun maqaalee dhuunfaan namni, bakkee ykn wanti tokko dhuunfatti ykn matamatatti itti beekkamuudha.
Finfinnee fikkf Maqaa dhuunfaati.
Hub: Maqaaleen dhuunfaa hedduumina agarsiisuuf dhamjecha -oota jedhu hin maxxanfatan.
Fkn: Caalaa Jenner Caalota hin jennu.
Kun Seerluga Afaan Oromooti.
Haata’uu malee dhamjecha -faa jedhu dabalachuun hedduumina agarsiisuu ni danda’a.
Maqaan kun Wantootni amala walfakkataa qaban iddoo hundatti ykn gamtaan kan ittiin beekkamaniidha.
Fkn: Saree biyya
Fikkf maqaa gamtaa jedhamu.
Maqaaleen gamtaa baay’inna agarsiisuudhaaf dhamjechoota akka:
-oota, -ota, -lee, -waan, -olii, -been jedhaman dabalatu/fudhatu.
Maqaaleen kunneen kan wantootni adda addaa bakka tokkotti ittiin waamamaniidha.
Koree fikkf maqaa dimshaashaati.
Maqaaleen kun yaada danoomaa of keessaa qabaatus yaada qeenxeen kan ibsamuudha.
Fkn: koreen hin hojjattu.
Ummanni maal jedha?
Himootni armaan olii yaada danoomaa qeenxessuudhaan ibsaa jiruudha.
Kun Maqaalee meeshaaleen garagaraa ittiin moggaafamaniidha.
Fikkf maqaa meeshaalee adda addaati.
Kun Maqaalee wantoota gocha, ta’umsa, yaadaa fi kkf irratti bu’uuramanii waamamaniidha.
Dhukkuba fikkf maqaalee killiyaati.
HUB: maqaaleen killayaa kun danoommii hin fudhatan.
Akkasumas Maqaalee hundi iddoo lamatti qoodamuu danda’u…
1. Maqaalee lakkaawaman(countable noun) fi
2. Maqaalee hin lakkaawamne( uncountable noun) jedhamuun hiramuu danda’u.
Maqaaleen lakkaawaman kan lakkoofsan murteessuu dandeenyuudha.
Fkn: tokko, lama, sadi fi kkf
Kan hin lakkawamne immoo kan lakkoofsaan hammasaa himuu hin dandeenyedha.
Fkn: Bishaan litirii shan jenna males Bishaan shan jechuu hin dandeenyu.
Jechi Bamaqaa jedhu kun jecha lama irraa dhufe. Isaanis:
√maqaa jechoota lamaan kana irraa dhufe.
Bamaqaa jechuun akkuma maqaan Isaa agarsiisutti jecha maqaa bakka bu’uu jechuudha.
Kanaafuu Bamaqaan jecha Maqaa bakka bu’uun tajaajiluudha.
Hub: Bamaqaan akka maqaa dhamjecha dabalachuun danoommii hin agarsiisu.
Bamaqaan maqaa qeenxee bakka bu’uufi maqaa danuu bakka bu’u gosa adda addaati.
Bamaqaan Afaan Oromoo keessatti beekkaman kanneen armaan gadiiti.
Akka seerluga Afaan Oromootti ramaddiin Bamaqaa gosa saditu jira.
A) Ramaddii tokkoffaa
B) Ramaddii lammaffaa
C) Ramaddii sadaffaa
Ramaddiin adeemsa dubbiin/haasaadhaan waliigaluu keessatti:
√kan dhageeffatu/dhageeffatan fi
√kan waa’een isaanii dubbatamuu kan mul’isuudha.
Ramaddiin Sadeen armaan olii kuneenis mataamatatti
Author MALKA RAFUUPosted on October 31, 2018 Categories UncategorizedLeave a comment on Gareewwan jechoota
Author MALKA RAFUUPosted on October 31, 2018 October 31, 2018 Categories UncategorizedLeave a comment on GAREEWWAN JECHOOTA
Walaloo hiriyaa gantuu
Jaala jiruu Koo
Kan guyyaa rakkoo ballinaa
Kan Abdii walii boonnu
Saniitu nagane na laate diinaa
Mee akamiin garaan Koo
Kanbir na Amana,
Nama kooti ja’ee
Ani yeroo hedduu
Kanin isaaf yaadu
If booda deebi’uu
Shira kanatti yaadu
Garaa nama deeyyiisse
Way anii ha baadu,
Sobduu ilkaan adiii
Hamaa afaan dammaa
Wajjiin turan malee
Hin beekan ilma namaa
Osoon baasuu dhimma
Halayyaa naf qote tun
An hintaane humaa
Silaa akka namaatiin
Author MALKA RAFUUPosted on October 22, 2018 Categories UncategorizedLeave a comment on Walaloo hiriyaa gantuu
Author MALKA RAFUUPosted on September 29, 2018 Categories UncategorizedLeave a comment on SEENAA SHEEK BAKRII SAPHALOO KUTAA -2ffaa
Hayyuu Kenya jaalalaaf kabajaa gudoo siif qaba
Hundeeffama waldaa maccaa tuulamaa bara 1963-1967 finfinneetti yoo bu’uureeffamu deeggarsa yaadaa fi hirmaannaa gara garaatin maddii dhaabbachaa akka ture himama. Yeruma kana osoo…
www.gobbele.com Powered by WordPress.com.